ရသကဏ္ဍ | လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်း | Page 3
လွတ်လပ်မှု၊ ချစ်ကြည်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် လူသားဆန်မှု အနုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)
ငါတို့ ဘယ်​လို​နေ​သေးလဲ – မိုးဦးဆွေညိန်း
​ရောဂါပဲ ဘယ်​​တော့မှ အမျှင်​ပြတ်​တယ်​ မရှိ တခုခု ဝင်​​ဆောင့်​​နေတာ အစိုးရနဲ့ ပြည်​သူဆိုတာ ထာဝရရန်​သူ​ပေါ့ ...
​ရောဂါပဲ ဘယ်​​တော့မှ အမျှင်​ပြတ်​တယ်​ မရှိ တခုခု ဝင်​​ဆောင့်​​နေတာ အစိုးရနဲ့ ပြည်​သူဆိုတာ ထာဝရရန်​သူ​ပေါ့ တ​စောင်း​စေးနဲ့ မျက်​​ချေး အလိုမပြည့်​မှု​တွေက ဒိုးယို​ပေါက်​ ငါတ်ို့ဟာ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ အမြဲပဲ ...
ဥတုမြောက်လှချည့် တုတ်တုတ်မျှမငြိမ်ဖူးတဲ့ ကောက်ရိုးခြေထောက်မြက်ခြေထောက်တွေ ကျွဲတဖက် ဂွန်ဒေါင်ဖတဘက် ညနေအရိပ ...
ဥတုမြောက်လှချည့် တုတ်တုတ်မျှမငြိမ်ဖူးတဲ့ ကောက်ရိုးခြေထောက်မြက်ခြေထောက်တွေ ကျွဲတဖက် ဂွန်ဒေါင်ဖတဘက် ညနေအရိပ်ကြီးလက်တန်ရှည်က ဇိတော့ကုတ်ရဲ့နတ်ပြည်မရောက်ဘူး ရွာ။ မှောင်မှာဆိုလည်း နက်နက်သာမှောင်ချလိုက်စေချင ...
မရွေးချယ်ပဲ ရခဲ့တဲ့ ဘဝတွေ – ညိုခန့်ကို(သက္ကယ်ကျင်း)
သေနတ်ကလေးထမ်းတာ တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းတာပဲလား။ ဖိုးနီချွတ်ပုံခဲ့တဲ့ အဖြူအစိမ်းလေးဘေးမှာ သူ့အမေ မျက်ရည်လေးမြေ ...
သေနတ်ကလေးထမ်းတာ တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းတာပဲလား။ ဖိုးနီချွတ်ပုံခဲ့တဲ့ အဖြူအစိမ်းလေးဘေးမှာ သူ့အမေ မျက်ရည်လေးမခြောက်သေးဘူး။ ဖိုးနီဟာ ခု လူကြီးတယောက်ဖြစ်လို့။ ဖိုးနီဟာ ကစားရတာ ဝါသနာမထုံတတ်တော့ဘူး။ ဖိုးနီဟာ က ...
ပိရမစ်ကြီးတွေရှိနေဆဲပဲ ပိရမစ်ကြီးတွေကို ဆောက်ခဲ့တဲ့လူတွေ ရှိမနေတော့ဘူး ပိရမစ်ကြီးတွေဟာ လူသစ်တွေနဲ့အဆင်မှေ ...
ပိရမစ်ကြီးတွေရှိနေဆဲပဲ ပိရမစ်ကြီးတွေကို ဆောက်ခဲ့တဲ့လူတွေ ရှိမနေတော့ဘူး ပိရမစ်ကြီးတွေဟာ လူသစ်တွေနဲ့အဆင်မှပြေပါရဲ့လား ရွေ့နေတဲ့ခေတ်တွေနဲ့ကော အေးဆေးပဲလား ကျောက်တုံးတွေနဲ့လုပ်ထားတော့ ခံစားချက် မာကျောအေးစက ...
Poetry Wave Vol .6ထွက်ပြီ
Poetry Wave Vol .6ပါဝင်​မှုများ Cover Story ​ မောင်​သင်းခိုင်​ စာ​ပေဘဝမှတ်​တမ်း- အောင်နှင်းသစ် မေးမြန်း ...
Poetry Wave Vol .6ပါဝင်​မှုများ Cover Story ​ မောင်​သင်းခိုင်​ စာ​ပေဘဝမှတ်​တမ်း- အောင်နှင်းသစ် မေးမြန်းထားတဲ့ မောင်သင်းခိုင်ရဲ့ကိုယ်ရေးအကျဉ်းအချို့ ကဗျာ ​မောင်​ကြူးရင့်​၊ ရန်​နည်​၊ နိုင်​မွန်​​အောင် ...
ကျွန်းမကြီး- အောင်ရဲ (၁)
ဧရာဝတီကို အခါခါယုံမှတ်လို့ အခါခါပုံအပ်ခဲ့ရာက သူ့ဘဝသူ ပါးစပ်ဖျားလေးတင် မေ့နေတတ်တဲ့သူရယ်ပါ ။ ဒုက္ခဆိုတာ သူကိ ...
ဧရာဝတီကို အခါခါယုံမှတ်လို့ အခါခါပုံအပ်ခဲ့ရာက သူ့ဘဝသူ ပါးစပ်ဖျားလေးတင် မေ့နေတတ်တဲ့သူရယ်ပါ ။ ဒုက္ခဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတော့ အရေထူသွားလိုက်ပုံက ချိုသလား ခါးသလား မသိတော့ဘူး ပူသလား အေးသလား မသိတော့ဘူး ။ သ ...
စိတ်မော လူမော ညများ -နေရိုင်း
ညတိုင်းညတိုင်း အဲဒီဒုက္ခအိုးထဲငါဖွင့်ဖွင့်ကြည့်နေတာ ဒုက္ခကောင်တွေကတွားသွားလို့ခရီးပေါက်ခဲ့ ရက်ပေါင်းထောင်ချ ...
ညတိုင်းညတိုင်း အဲဒီဒုက္ခအိုးထဲငါဖွင့်ဖွင့်ကြည့်နေတာ ဒုက္ခကောင်တွေကတွားသွားလို့ခရီးပေါက်ခဲ့ ရက်ပေါင်းထောင်ချီ နေပြီပေါ့။ ကောင်းကင်ကကြယ်တွေတစင်းပြီးတစင်း ကြွေကျနေတာတောင် ကြယ်တွေက ယုတ်လျော့မသွားဘူး ခရီးအဆက ...
ခေတ်​တိုင်း​ခေတ်​တိုင်းမှာ ​မွေးဖွားခဲ့တာ​ပေါ့ဝါးလိုလို ထရံလိုလို ​ကောင်​စား​မျိုး​တွေအခုပဲ သူတို့ဟာ သ ...
ခေတ်​တိုင်း​ခေတ်​တိုင်းမှာ ​မွေးဖွားခဲ့တာ​ပေါ့ဝါးလိုလို ထရံလိုလို ​ကောင်​စား​မျိုး​တွေအခုပဲ သူတို့ဟာ သူရဲ​ကောင်း​တွေငါတို့မြို့ကြီး ကျ​ဆုံးမသွားရ​လေ​အောင်​ သူတို့ပဲ ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့သလိုလိုဘာလိုလိုညာလ ...
ရွေးချယ်ရန် အဖြေမှန်- ဆလိုင်းမြတ်နိုးသူ
ငပေါတယောက် အိမ်တံခါးခေါက်ပြီး စာသားတွေ လာပို့လိမ့်မယ် သုံးစားမရတဲ့ ဘယ်သူမှမယုံကြည်တဲ့ သတင်းစာစက္ကူတွေ ဟိုး ...
ငပေါတယောက် အိမ်တံခါးခေါက်ပြီး စာသားတွေ လာပို့လိမ့်မယ် သုံးစားမရတဲ့ ဘယ်သူမှမယုံကြည်တဲ့ သတင်းစာစက္ကူတွေ ဟိုးတုန်းက လာပို့သလိုမျိုးပေါ့ သူတို့ဟာ မမြင်ရတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကို သင့်ထံပို့ကြပြီး မဟုတ်ပါဘူး အဲဒီမှ ...
အသက် – ဖိုးရွှေညီမှိုင်း
ဓား​တွေက အပြီးသတ်​မှာ တုံးသွားတတ်​​ပေမယ့်​ တရား​တွေက အပြီးသတ်​မှာ ဘယ်​​တော့မှ မတုံးကြ နာသူကိုယ်​တိုင်​ ဆက ...
ဓား​တွေက အပြီးသတ်​မှာ တုံးသွားတတ်​​ပေမယ့်​ တရား​တွေက အပြီးသတ်​မှာ ဘယ်​​တော့မှ မတုံးကြ နာသူကိုယ်​တိုင်​ ဆက်​​သွေးကြ။ ပုံပြင်​​တွေက အပြီးသတ်​မှာ ဆုံးသွားတတ်​​ပေမယ့်​ ကဗျာ​တွေက အပြီးသတ်​မှာ ဘယ်​​တော့မှ မ ...
ထောင်မင်းသားနဲ့ တော်လှန်ရေး- အောင်ကောင်းမြစ်
ငါ မမွေးခင် (၁၁)နှစ်မှာ ငါ့နိုင်ငံတော် သူ့ကျွန်ဘဝက လွတ်မြောက်တယ် ငါမွေးပြီးလေးနှစ်မှာ ငါ့နိုင်ငံတော် စစ်က ...
ငါ မမွေးခင် (၁၁)နှစ်မှာ ငါ့နိုင်ငံတော် သူ့ကျွန်ဘဝက လွတ်မြောက်တယ် ငါမွေးပြီးလေးနှစ်မှာ ငါ့နိုင်ငံတော် စစ်ကျွန်ဘဝကို ကျရောက်တယ်။ (၇၁) နှစ်မြောက် လွပ်လပ်ရေးနေ့မှာ ၆၁) ကြိမ်မြောက် မလွတ်လပ်သေးတဲ့ ကြေညာစာတမ ...
ကျွန်းမကြီးကဗျာ – တိုးနှောင်မိုး
သူ့သမိုင်းနဲ့သူ သောင်ထွန်းတယ် ဘယ်သူ့စိတ်ကူးမှမလိုဘူး ကဗျာဟာ အဲ့လိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ မြစ်ရေအလျင်။ စက်မှုဇ ...
သူ့သမိုင်းနဲ့သူ သောင်ထွန်းတယ် ဘယ်သူ့စိတ်ကူးမှမလိုဘူး ကဗျာဟာ အဲ့လိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ မြစ်ရေအလျင်။ စက်မှုဇုံထဲကထွက်လာတဲ့ ပဋိသန္ဓေတားဆေးဘူးခွံမဟုတ်ဘူး မြစ်ကသူရဲ့လက္ခဏာ ဆန့်ထွက်နေသောကဗျာ။ ရှုမဆုံး မြင်ရ လွတ ...
လူမသိသူမသိသင်္ဘော ဆိပ်ခံတံတား- ရာမိုးဇင်
ဒီပုံအတိုင်း ငါရွေ့လာတာမဟုတ်ခဲ့ဘူး သင်္ဘောတစ်စီးစာ ကောက်ကျစ်မှုနဲ့ ငါးပါးသီလ ဟန်ရေးပြခွဲတမ်းတွေကို ဘုရားရှင် ...
ဒီပုံအတိုင်း ငါရွေ့လာတာမဟုတ်ခဲ့ဘူး သင်္ဘောတစ်စီးစာ ကောက်ကျစ်မှုနဲ့ ငါးပါးသီလ ဟန်ရေးပြခွဲတမ်းတွေကို ဘုရားရှင်တွေရှေ့မှောက်မှာ ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ် မာလိန်မှူးမပါတဲ့ ရွေ့လျားမှုဆိုတာ ကြယ်တွေလို အာကာသထဲ ကွန်းပတ်စ် ...
ရဟန္တာ​တွေ ​နေတဲ့တိုင်းပြည်​- ဇော်သစ်ကြည်
အဂုင်္လိမာလ သာ အဟိံသကတစ်​ပါးဖြစ်​ခဲ့ ဒီမှာ ဘုရားအဆူဆူပွင့်​​နေပါပ​ကော... ။ ရင်​ကြား​စေ့ဖို့ ​ဟောင်း​လောင်း ...
အဂုင်္လိမာလ သာ အဟိံသကတစ်​ပါးဖြစ်​ခဲ့ ဒီမှာ ဘုရားအဆူဆူပွင့်​​နေပါပ​ကော... ။ ရင်​ကြား​စေ့ဖို့ ​ဟောင်း​လောင်းပွင့်​​နေတဲ့ ရင်​ဘတ်​ ထပ်​ဖွင့်​​ပေးရမလား။ ငြိမ်းချမ်း​ရေး​တေး အတူတူသီ​ကြွေးမယ့်​ နှလုံးသားေ ...
မြင်ကွင်း – ဟိန်းလတ်မိုး
အရူးကအရူးကို ဆေးကုနေတယ်။ နဖူးရှုံ့တာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်လဲ။ မျက်မှောင်ကြုတ်တာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရှိပြီလဲ။ တောက်ခေ ...
အရူးကအရူးကို ဆေးကုနေတယ်။ နဖူးရှုံ့တာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်လဲ။ မျက်မှောင်ကြုတ်တာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရှိပြီလဲ။ တောက်ခေါက်ဖူးတာ ဘယ်နှစ်ခါလဲ။ အရူးကအရူးကို မေးတယ်။ အရင်အတိုင်းပဲတဲ့ အရူးကဖြေတယ်။ အရင်တိုင်းပဲဆို ကောင်း ...
The Freedom Wave Magazine (English Version)